Arsenal oo qorsheyneysa inay lasoo saxiixato weeraryahan hore ee Real Madrid ah – Gool FM
(London) 20 Juun 2022. Macalinka kooxda Arsenal ee Mikel Arteta, ayaa doonaya inuu soo gabagabeeyo heshiisyo cusub inta lagu guda jiro suuqa kala iibsigan ee xagaagan, isaga oo bar-tilmaameed ka dhiganayo weeraryahan hore ee kooxda Real Madrid ah.
Sida lagu sheegay warbixin uu daabacay wargeyska Ingiriiska ka soo baxa ee Daily Mail, Arsenal ayaa soo bandhigtay dalab ay ku doonayso in ay ku hesho adeega Álvaro Morata, kaas oo joojiyay heshiiskii amaahda ahaa ee uu ku joogay Juventus kuna laabtay Atletico Madrid.
Wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in Arteta uu la tacaalayo arrinta ku saabsan shaqaaleysiinta weeraryahan cusub, oo ah mudnaanta ee Gunners inta lagu jiro suuqa xagaagan, kaddib markii ay ka tageen kooxda Alexandre Lacazette iyo Pierre-Emerick Aubameyang.
Sidoo kale Gunners ayaa xiiseeneysa la soo saxiixashada weeraryahanka reer Brazil ee Gabriel Jesus, kaasoo heerar heer sare ku soo bandhigay kooxda heysata horyaalka Premier League ee Manchester City.
Waxa xusid mudan in Morata uu hore uga soo ciyaaray horyaalka Ingiriiska markii uu u ciyaarayay Chelsea intii u dhaxaysay 2017 ilaa 2019, wuxuuna muddadaas ciyaaray 72 kulan oo tartamada oo dhan ah, isagoo u dhaliyay 24 gool, 6 goolna ka caawiyay saaxiibadiis.
Dhinaca kale Morata waxa uu Blues la ciyaaray 47 kulan oo Premier League ah, isagoo u dhaliyay 16 gool, wuxuuna ka caawiyay saaxiibadiis 6 gool.
Manchester United oo dalabkeedii labaad ka gudbisay Frenkie de Jong